DV-घरेलु हिंसा- | Kobe International Center for Cooperation and Communication
घरेलु हिंसा (डीभी) हिंसा हो तपाईंको नजिकको कसैले त्यस्तो जीवनसाथी, प्रेमी वा परिवारको सदस्यले गरेको हुन्छ। डिभिको धेरै पीडित महिलाहरू हुन्। डिभीको प्रकृति हिंसाको प्रयोग हो अर्को व्यक्तिको नियन्त्रण गर्न र नियन्त्रण गर्न। त्यहाँ हिंसा को धेरै प्रकारका छन्।
शारीरिक हिंसा ・・・कुटपिट, लात हान्ने, तान्ने, कसैलाई चीजहरू फाल्ने आदि।
भावनात्मक हिंसा ・・・चिल्ला, कसम, धम्की, बेवास्ता आदि।
यौन हिंसा ・・・यौन सम्बन्धको माग, गर्भनिरोधकको साथ गैर सहकार्य आदि।
वित्तीय हिंसा ・ ・・पर्याप्त बस्ने खर्च प्रदान नगर्ने, कामको लागि अनुमति नदिने आदि।
सामाजिक हिंसा ・・ ・सीमित आन्दोलनहरू, साथीहरू हेर्न अनुमति दिँदैन, तपाईंको राहदानी लिने आदि।
बच्चाहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै ・・・बच्चाहरूको अगाडि हिंसा प्रदर्शन गर्ने आदि।
पार्टनरले तपाइँको भिसा स्थिति नवीकरण गर्न सहयोग गर्दैन, तपाइँको संस्कृतिको अनादर गर्दै, तपाइँको उत्पत्तिको खाना भेदभाव गर्दै आदि।
2. यदि तपाईं डिभीको शिकार हुनुहुन्छभने ...
डीभीको लागि जिम्मेवारी पीडितको साथ कहिल्यै हुँदैन।कारण जेसुकै होस्, हिंसाको लागि जिम्मेवार अपराधीमाथि पर्दछ।यदि तपाईंलाई डिभीको शिकार हुन सक्छ जस्तो लाग्छ भने एक्लै पीडित हुनुहुन्न, कृपया विशेषज्ञ एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।यदि तपाईं अपराधीबाट अलग गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यहाँ अस्थायी सुरक्षा र संयन्त्र आदेशहरूका लागि प्रणालीहरू छन्।
☆सुरक्षा आदेशको लागि याचिका ... यो कुनै आदेशबाट तपाईंलाई बचाउनको लागि आदेश हो। तपाईंले कागजद्वारा जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्नुपर्नेछ।
टाढा-टाढा अर्डर ... एक आदेश तपाइँको पुग्न तपाइँको पति या साथीलाई निषेध गर्न। डिक्रीको अवधि6महिना हो।
बच्चाहरू / आफन्तहरूसँग सम्बन्धित रहनुहोस् ... तपाईंको पति / पार्टनरलाई २० बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू / उनीहरूसँग बस्ने जो आफुसँग बसिरहेका छन् नजिकबाट रोक्न आदेश। डिक्रीको अवधि6महिना हो।
खाली गर्ने आदेश ... तपाइँको पति वा साथीलाई परिसर छोड्ने आदेश। डिक्रीको अवधि २ महिना हो।
＊जब पति वा पार्टनरले आदेशको पालना गर्दैनन्, ऊ / उनी कानूनको अनुरूप कठोर व्यवहार गरिनेछ।
＊जब तपाइँ सुरक्षाको क्रम समाप्त भए पछि तपाइँ अझै हानिको मार्गमा हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाइँले नयाँमा पुन: आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
＊सुरक्षा आदेशको लागि निवेदन दिन, तपाइँले महिलाहरूको लागि डिभी परामर्श आरसीएम (कोबे शहर स्पाउसल हिंसा परामर्श र समर्थन केन्द्र) मा जानुहोस् वा "लाइफ एण्ड सेक्युरिटी" को एक पुलिस स्टेशनमा अग्रिम डिभिजनमा जान आवश्यक छ, र आफ्नो पति / पार्टनरको हिंसाको बारेमा परामर्श गर्नुहोस्।
3. परामर्श सेवाहरू- आपतकालीन अवस्थामा 110 डायल गर्नुहोस्
महिलाका लागि डिभी परामर्श कोठा
(कोबे शहर जीवनसाथी हिंसा परामर्श र समर्थन केन्द्र)
(डिसेम्बर २८ - जनवरी ४ बाहेक)
डीभी को शिकार को लागी सहायता केन्द्र
हरेक दिन बिहान ९ बजे देखि
बेलुकि ९ बजे सम्म 078-732-7700
विदेशीहरूको सहायता कोबेको लागि गैर-सरकारी संगठन
शुक्रबार १बजे देखी बेलुकि ८ बजे सम्म
अंग्रेजी, तागालोग, स्पेनिश, पोर्तुगाली,
चिनियाँ (18:०० सम्म) 078-232-1290
महिला नेट कोबे
१०:०० देखि बेलुकि ४:०० बजे
(हटलाइन डीभीका लागि परामर्श)
ह्योगो प्रिफेक्चुरल पुलिस विभाग २४ घण्टा 078-371-7830
W・S ह्योगो बिहिबार १२:००- ५:०० 078-251-9901
बच्चा र परिवार समर्थन प्रभाग
सोमबार – शुक्रबार(८：४५ - ५：३०)
東灘 हिगाशिनाडा वार्ड कार्यालय 078-8414131
灘 नाडा वार्ड कार्यालय 078-843-7001
中央 च्युयो वार्ड कार्यालय 078-232-4411
兵庫 ह्योगो वार्ड कार्यालय 078-511-2111
北 किता वार्ड कार्यालय 078-593-1111
北神区役所 होकुसिन वार्ड कार्यालय
長田 नागाता वार्ड कार्यालय 078-579-2311
須磨 सुमा वार्ड कार्यालय 078-731-4341
北須磨支所 कितासुमा वार्ड कार्यालय 078-793-1313
垂水 तारुमि वार्ड कार्यालय 078-708-5151
西 निसि वार्ड कार्यालय 078-929-0001
अनुवाद अप्रिल, २०१५को रूपमा उपलब्ध डाटामा आधारित छ।कृपया नोट गर्नुहोस् कि नयाँ प्रणालीहरू, प्रणाली परिवर्तनहरू आदि यस मिति पछि शुरू भएको हुन सक्छ। लिंक गरिएका वेबसाइटहरूका लागि उत्तरदायित्व उनीहरूका सिर्जनाकर्ताहरूको साथ छ। कोबे शहरले तिनीहरूको सामग्री आदिको लागि कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गर्दैन।